सबैका लागि कन्ट्रोलरहरू, PS3 कन्ट्रोलर (Cydia) को साथ खेलहरू नियन्त्रण गर्नुहोस् आईफोन समाचार
सबैका लागि कन्ट्रोलरहरू, PS3 कन्ट्रोलर (Cydia) को साथ खेलहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
आईओएस of को आगमनले शारीरिक नियन्त्रणहरूको माध्यमबाट हाम्रो आईफोन र आईप्याडको भिडियो खेलहरू प्रबन्ध गर्ने सम्भावना ल्याएको छ। अन्तत: टच नियन्त्रणहरू छोड्ने सपना जुन उत्कृष्ट गुणवत्ता भिडियो गेमहरूको आनन्द लिन लगभग असम्भव बनाउँदछ, तर सत्य यो हो पहिलो ड्राइभरहरू जारी गरिएको छ कि धेरै महँगो छ र यो पनि देखिन्छ कि पहिलो समीक्षा धेरै अनुकूल भएको छैन। के तिमि सोच्न सक्छौ तपाइँको PS3 को डुअल शक with को साथ GTA सैन एन्ड्रियासलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुहोस्? ठीक छ, यो एक सपना होईन, तर वास्तविकता जुन तपाईंले अबदेखि सिडियाबाट नयाँ चिह्नितबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ: सबैलाई नियन्त्रणकर्ताहरू।
चिमूट अब बाट डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ModMyi रेपो priced 1,99 को मूल्य, एक हाँसोयोग्य मूल्य यदि हामी सोच्दछौं कि तपाईं PS3 मा जस्तो उत्कृष्ट कन्ट्रोलरको साथ तपाईको आईप्याड वा आईफोनमा प्रामाणिक खेलहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ, र अझ बढि जब हामी हाल हामीले पाएका कन्ट्रोलरहरूको अत्यधिक मूल्यहरू देख्छौं। बजार सबैका लागि यसको विकासकर्ताका अनुसार नियन्त्रणकर्ताहरू अधिक नियन्त्रणकर्ताहरूको समर्थनको साथ अपडेट हुनेछन्। यो कुनै पनि भिडियो गेमसँग पनि उपयुक्त छ जुन MFI नियन्त्रकहरूको लागि समर्थन गर्दछ, नयाँ स्टोरहरू जुन अनुप्रयोग स्टोरमा आउँदैछन्। हामी तपाईंलाई यो कसरी काम गर्दछन् भनेर एक भिडियो देखाउँदछौं।
कन्फिगरेसन तपाईको पीसी वा म्याक मार्फत हुनु पर्छ पहिलो पटक तपाईले कनेक्शन बनाउनु भएको छ, अबदेखि यो अपरेशन दोहोर्याउन आवश्यक पर्दैन। यो एक सरल प्रक्रिया हो, र यसलाई एक अनुप्रयोग आवश्यक पर्दछ जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो पृष्ठ, जहाँ तपाइँको IOS उपकरण जोडी कसरी गर्ने मा निर्देशन र नियन्त्रण नब पनि देखा पर्छ। एक चोटि यो काम सकिसकेपछि, तपाईंको उपकरण र नियन्त्रण एकाइलाई अब कुनै थप सेटि needहरू आवश्यक पर्दैन। यो मात्र आवश्यक हुनेछ प्रत्येक चोटि ब्लुटुथ बिच्छेदन गर्नुहोस् तपाईं कन्ट्रोलर प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, किनकि यसले BTstack प्रयोग गर्दछ। ब्लुटुथ बिच्छेदन गर्नुहोस्, खेल चलाउनुहोस् (MFI संग मिल्दो) र जब प्रोम्प्ट हुन्छ, डुअल शक control कन्ट्रोलरको मध्यमा रहेको "PS" बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईलाई केवल खेलको आनन्द लिनुपर्नेछ।
थप जानकारी - लगिटेक पावरशेल कन्ट्रोलर अब पूर्व बिक्रीमा
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » सबैका लागि कन्ट्रोलरहरू, PS3 कन्ट्रोलर (Cydia) को साथ खेलहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
XBOX360 नियंत्रकहरूको लागि अपडेट हुन पर्खँदै
गन्धलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै खराब, यो केहि खेलहरूमा मुश्किलसँग मिल्दो छ, इमुलेटरहरूको साथ यसले काम गर्दैन।
लेखमा स indicated्केत गरिए अनुसार, खेल MFI ड्राइभरहरूसँग उपयुक्त हुनुपर्दछ, त्यसैले इमुलेटरहरू काम गर्न गइरहेका छन्।
दुई हप्ता अघि मैले एकल "आईपगा" रिमोट किनें र
केवल GTA सैन एन्ड्रियासमा परीक्षणको लागि। अन्तमा होइन
के यसले काम गर्दछ ... के यसले काम गर्दछ? रमाईलो
अहिले यो PS3 को साथ मात्र काम गर्दछ
पुन: कर्डहरू नया गर्नुहोस् भन्यो
इमुलेटरहरूसँग काम गर्न यसलाई स्थापना गर्न आवश्यक छैन त्यहाँ एक इमुलेटर छ जसको नाम retroarch छ र यो संस्करण १.०.०-१ मा छ र यो बहु-हड्डी इमुलेटर हो तपाईंले इमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ-बेस-सेनेस-जीबीए-मामे-निओजियो -turbograf-psx इत्यादि र तपाइँ तपाइँको PS1.0.0 कन्ट्रोलर उही छैटौं जोडियो भिडियो उपकरणसँग सि can्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँले कुनै कुराको दुरुपयोग गर्नुपर्दैन युट्यूब अभिवादनमा iOS मा केही retroarch भिडियो हेर्नुहोस्।
ईन्नेट रे कर्डलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं टिभीमा आईफोन गेम कसरी हेर्नुहुन्छ?
मसँग एक सानो प्रश्न छ के कन्ट्रोलर आधुनिक कम्ब्याट with सँग उपयुक्त छ?
मैले चिम्टा किनेको छ र gta परीक्षण गरिएको छ मैले उत्कृष्ट फिफा खोजेको छु र एमसी4gta मा जडान गर्न सोध्छ र सबै चीजले जोड्छ तर बटनले काम गर्दैन किनकि विकासकर्ताले भनेका छ कि कार्यक्रम अधिक गेम्स अभिवादनको साथ अनुकूल हुन अपडेट हुनेछ।
म आज PS3 कन्ट्रोलर किन्ने सोच्दै थिए। तर अझै पनि मलाई श the्काबाट हटाउनुभएकोमा धन्यवाद।
हाबिल पेन गान्डिला भन्यो
के तपाई सोच्छन् कि तिनीहरूले PS4 लाई कन्ट्रोल बनाउने छन्?
हाबिल पेन गन्डारिलालाई जवाफ दिनुहोस्
के यो अनौपचारिक नियन्त्रणको लागि उपयुक्त छ?
एल्डो जीस भन्यो
म आशा गर्दछु कि अपडेटले PS4 कन्ट्रोलर (dualshock 4) को साथ काम गर्दछ
Aldo Jeus लाई जवाफ दिनुहोस्
अमीले मलाई फाइटर एसएफ iv भोल्टको खेलसँग सेवा गर्दैन
युनियरलाई जवाफ दिनुहोस्
म जान्न चाहन्छु कि त्यहाँ सबैको लागि कन्ट्रोलरहरू निस्क्रिय गर्न कुनै विकल्प छ र मात्र यो सक्रिय गर्दछ जब यो मेरो रुचि हो, किनकि म खेल खेल्दछु जुन मलाई रिमोट कन्ट्रोलको आवश्यक पर्दैन र ब्लुटुथ सधैं खेल खोल्दा वा तिनीहरूलाई छोड्दा खोल्दछ। पृष्ठभूमि र ब्याट्री धेरै नोट गर्दछ।
Joak लाई जवाफ दिनुहोस्
हिजो अद्यावधिक १.१-१ आयो र तपाइँले रीसेटबाट ट्वीकहरू असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ र पीएसआई जोइस्टिकको लागि समर्थनलाई बधाई थपियो
Ami मेरो लागि एक अनौपचारिक नियन्त्रण हड्डी समुद्री डाकूको साथ उत्तम कार्य गर्दछ समान प्रक्रिया हो
Rickiccg लाई जवाफ दिनुहोस्
जेफ्री टोरेस बेलो भन्यो
यो PSP एमुलेटर भनिन्छ PPSSPP भनिन्छ र निन्टेन्डो ds इमुलेटरको साथ पनि काम गर्दछ?
जेफ्री टोरेस बेलोलाई जवाफ दिनुहोस्
यो काम गर्दैन, केवल mfi खेलको साथ, आईफोनको लागि स्पेनीमा बनाइएको।
ईन्नेट रे डोरा भन्यो
PS3 कन्ट्रोलर जाँच गरियो सबैको लागि ट्वीक कन्ट्रोलरसँग काम गर्दछ र PS3 कन्ट्रोलर जाँच गरीयो र blutrol यस महिना अभिवादन बाहिर आयो।
इनाटो पुनः कर्डहरूमा जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ के छ किनकि स्पष्टतः ब्लुट्रलका सिर्जनाकर्ताहरू यसलाई आईओएस couple मा जोडी गर्न उत्कृष्ट भएका छन्, जसले दुख्छ।
निको सोसा भन्यो
सबैलाई नमस्कार, मलाई समस्या छ:
मैले धेरै ट्यूटोरियल अनुसरण गरेको छु र मलाई लाग्छ कि मैले सबै चरणहरू राम्रोसँग गरेको छु।
- आईपड आईओएस 4.१.१ को साथ जेलब्रेकको साथ, निश्चित रूपले
- PS3 लाल स्तर नियंत्रक
जब म GTA सैन एन्ड्रियासमा प्रवेश गर्छु यसले मलाई PS3 कन्ट्रोलर खोल्न आग्रह गर्दछ र म यो गर्छु। यो केवल यसलाई चिन्न वा जडान गर्दैन, तर यसले ब्लुटुथलाई असक्षम बनाउँदछ यसलाई अनक्रियात्मकमा छोड्नाले मैले नेटवर्क सेटि settingsहरू रिसेट गर्नुपर्दछ यसलाई फेरि सञ्चालनका लागि।
कुनै समाधान? धन्यबाद 🙂
निको सोसालाई जवाफ दिनुहोस्
सेबास्टियन बहामोन्डस भन्यो
चिमटा btstack पहिलो पहिलो मा हुनु पर्छ यदि यो आईओएस मा छ वा कुनै पनि यो काम गर्दैन, सादर
सेबास्टियन बहामोन्डसलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले जॉयस्टिकलाई सिक्स पेयरटोलसँग पेयर गर्नुभयो? र तपाइँको जोइस्टिक मूल के हो? के तपाईंले अर्को जोइस्टिकको प्रयास गर्नुभयो?
ईन्नेटलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो जॉयस्टिक एक रेड लेवल ब्रान्ड हो, मिडियामार्कमा किनेको, मसँग यो धेरै स्थानमा रहेको थियो जुन चिनियाँ जोइस्टिकसँग यसले पनि काम गर्‍यो।
जब तपाइँ खेल प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, एक सूचना बाहिर आउँदछ ताकि तपाइँ नियन्त्रण जडान गर्न सक्नुहुन्छ, के तपाईंलाई थाहा छ किन त्यो सूचना बाहिर आउँदैन जब एक आधुनिक लडाई en मा प्रवेश गर्दछ?
आधुनिक लडाई m mfi संग उपयुक्त छैन
त्यसैले तपाईं यसलाई कन्ट्रोलरसँग खेल्न सक्षम हुनुहुने छैन